सफलताको लागि 25 चरणहरू: खोज इञ्जिन अनुकूलन र व्यापार ब्लगि | Martech Zone
सोमबार, अगस्ट 17, 2009 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
तयारीको लागि ब्लग इंडियाना, र ब्रायन पोभलिन्स्कीको सहयोगमा, मैले ton 75 पृष्ठको ई-बुक सुरू गरें खोज इञ्जिन अनुकूलन र व्यापार ब्लगिंग.
हामीले ब्लग इन्डियानामा १०० भन्दा बढी प्रतिलिपिहरू दियौं र प्रतिक्रिया अविश्वसनीय छ। म सबै समर्थन को लागी कदर गर्छु!
किनकि यो मेरो पहिलो ईबुक हो, त्यसैले म वेबमा ई-पुस्तकहरू राख्ने केही अन्य ब्लगरहरूको सल्लाह लिइरहेको छु। मैले प्राप्त गरेको पहिलो सल्लाह भनेको सीमित समयको लागि लागत ($ from$ बाट) कम गर्ने थियो। यसले दुई उद्देश्यहरू पूरा गर्दछ ... यो ई-पुस्तक प्रचलनमा आउँदछ यसलाई धेरै कम खर्चिलो बनाएर र यसले पुस्तक वरिपरि केहि चर्चा उत्पन्न गर्दछ।
सामग्रीको तालिका डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईं यो पुस्तक कत्तिको व्यापक छ देख्नुहुनेछ। म केही समयको लागि $ 9.99। At मा मूल्य राख्न लागिरहेको छु - पर्याप्त प्रतिलिपिहरू डाउनलोड नभएसम्म मैले केही बज हेर्न सुरु गरें। त्यसोभए Buzzin सुरु गर्नुहोस्!
अगस्ट 18, 2009 मा 9: 09 AM
तपाईको नयाँ ईबुकको लागि शुभकामना डगलस,
अगस्ट 19, 2009 बेलुका 5:14 बजे
ब्लग इंडियाना र WOW मा यो ईबुकको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न म भाग्यशाली थिएँ। यो $ 9.99 भन्दा धेरै लायक छ! यो वास्तवमै एसईओको बारेमा उत्कृष्ट सामग्रीले भरिएको छ। मैले पुस्तकको आधा बाटो पनि पूरा गरिसकेको छैन र मैले यसलाई प्रिन्ट आउट गर्ने र डेस्क सन्दर्भको रूपमा राख्ने निर्णय गरेको छु। तपाईं निराश हुनुहुने छैन! राम्रो काम डग र ब्रायन!
अगस्ट 24, 2009 बेलुका 5:01 बजे
अति उत्तम, डग! म आशा गर्दछु यो ठूलो बिक्रि भयो!